LALANA EO ANJOMA : Miteraka fofona maimbo tsy zakan’ny mponina ny rano miangona lava
Mampiaka-peo amin’izao fotoana izao ireo mponina ao amin’ny fokontany Anjoma Toamasina. 10 janvier 2019
Tsentsina ny tatatra vokatry ny fanorenana tsy ara-dalàna. Vokany, mitohana ny rano. Na andro maina na avy orana, dia tsy misy fiovana. Efa mivadika ny lokon’ny rano. Mivadika maitso mamoaka fofona maimbo. Raha ny fitantaran’ny mponina eny an-toerana, dia mpandraharaha mpanao fitaterana amin’ny fiarabe no tompon’ilay fanorenana tsy ara-dalàna eo ambony tatatra tokony handehanan’ny rano. Nanomboka ny taona 2007 ka hatramin’izao 2019 dia tsy mbola nialana rano mihitsy raha io lalana ao Anjoma io.
Ny mahagaga dia mitazam-potsiny ny avy eo anivon’ny Kaominina Toamasina ambonivohitra, hoy hatrany ny fanazavana. Manomboka mampiaka-peo ny vahoaka. Miantso ny kaominina izy ireo mba handray andraikitra. Tombontsoan’olon-tokana manelingelina ny fiainam-bahoaka iray manontolo. Raha ny fanazavan’ny solontenan’ny mponina ao Anjoma izay nihaona tamin’ny mpanao gazety, dia tsy misy posy sy tuc-tuc avy handalo amin’ilay lalana intsony vokatr’izao zava-misy izao.
Mandrangaranga ny mponina fa raha tsy misy fandraisan’andraikitry ny Kaominina ao anatin’ny fotoana fohy, dia manambana hidina an-dalambe izy ireo.
Raim-pianakaviana iray matin’ny fanafody mampihenjana MORAFENO - TOAMASINA (237) 10 juillet 2019 Tratra tao Toliara i Jibril izay nahavanon-doza FANDATSAHAN’AINA AN’I GAEL TENY 67 HA (183) 9 juillet 2019 Voasambotra teny Anosizato ny jiolahy iray FANENDAHANA NIAMPY FANOLANANA (147) 10 juillet 2019 Mpandeha miisa 14 naratra mafy LOZAM-PIARAKIODIA TAO TOLIARA (111) 10 juillet 2019 Sinoa mibodo tanin’olona nitory ny ben’ny tanàna sy ny mpanolotsaina ADY TANY AO FARAHALANA - SAMBAVA (89) 10 juillet 2019 Saron’ny zandary tao Ambohimanga Rova ilay tambajotra goavana OMBY HALATRA (75) 12 juillet 2019